Mgbe ọ na-abịa egwuregwu, e nwere nnukwu collection dị na-ụlọ na ọtụtụ ngwaọrụ dị ka android ntị, mbadamba, Laptọọpụ na ndị ọzọ. Ebe, maka ndị hụrụ ya n'anya na na a ọhụrụ egwuregwu mgbe ụbọchị ole na ole, ọtụtụ egwuregwu dị na internet. Dịgasị iche iche nke gburugburu, ndịna-emeputa, odide, ihe aga eme na myiri atụmatụ, ịmata ihe dị iche ha dị iche iche edemede na otu n'ime ndị a edemede bụ "agbapụ egwuregwu n'ihi na Android". Ya mere, ebe a bụ ụfọdụ nke N'ọgbụgba égbè egwuregwu na nwetara ihe ọhụrụ ama na irrespective nke eziokwu na ma na ha na-free égbè egwuregwu n'ihi na Android ma ọ bụ ha bịa na-efu nke a di na nwunye nke dollar, ọnụ ọgụgụ nke Fans na-amụba ụbọchị .
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.3 ma dịgasị na ngwaọrụ.
Wepụtara na 15 May, n'afọ a, egwuregwu a nwere ndibọhọ obi nke ọtụtụ ndị gafee n'ụwa ya fun atụmatụ.
2. Isi Mayhem
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.3.3 ma ọ bụ ruo.
E nwere ụdị akụkọ-akara ke egwuregwu ebe ọkpụkpọ na-atụ anya ịzọpụta a enyi nwanyị na swipe na ninjas, nzuzo mmadụ ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọzọ, ndị na-oredered site President ka e gburu.
3. Nwụrụ Anwụ ịkpalite 2
Platform: Opekempe chọrọ maka OS bụ Android 4 ma ọ bụ elu, maka egwuregwu a
Nke a excellently gburu egwuregwu bụ banyere azọpụta ụwa site agbapụ na zombies. Isiokwu, ndịna-emeputa na audio mmetụta ndị n'ezie ezi.
4. Oge a na mbuso 4
Ahịa: $ 7
Platform: Opekempe OS chọrọ na-egwu egwuregwu a bụ Android 2.3
Ọ bụ ihe na-apụghị imeri emeri mmepụta oyiri nke n'ọgbọ agha egwuregwu n'ihi na PC na e mere graphically ọgaranya na ọ dị mfe na na na Android ngwaọrụ.
Platform: Android 2.3 ma ọ bụ ruo bụ naakwagide OS maka egwuregwu a.
Get a mara mma anụ na ahụmahụ na a goofy abụọ-mkpisi N'ọgbụgba égbè egwuregwu. Igbu costumed undead na-emeri scores.
Ahịa: $ 2.5 (Google Play Store)
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.3 ma ọ bụ ruo.
Ọ bụ a anya-polished na mkpịsị aka-enyi na enyi shooter egwuregwu na-eweta na a atọ onye agbapụ. Player Nwere ịzọpụta Princess na ulo-elu ma dum akụkọ nwere dị iche iche ọnwụnwa na ihe aga-eme na ya ụzọ ẹkụre.
7. Sky-agba chaa chaa: Oké Ifufe Raiders
Ahịa: $ 2.99 (Google Play Store)
Platform: Game achọ Android 4.1 na elu dị ka a na-akwado os.
Ọ bụ ihe na Air ọgụ egwuregwu. Player Ga bọmbụ na onye iro onwunwe ma na-echebe obodo. E mere ya na a ụzọ na-enye ọkpụkpọ a obi na-adị ndụ n'ezie ikuku.
8. Njikere Otu ebe Bang
Platform: Android 2.2 bụ kacha nta OS chọrọ.
Ọ bụ ihe dị mfe égbè egwuregwu ebe ọkpụkpọ nwere ime ka ndị ọzọ na ndị ọzọ scores tupu oge agwụ n'ihi na ọrụ kpọmkwem. Na otu agadi n'ebe ọdịda anyanwụ isiokwu ma oge a aesthetics, egwuregwu a bụ nanị amamiihe.
9. oku nke ọrụ: Ebu Team
Ahịa: $ 7 (Google Play Store)
Platform: OS chọrọ bụ Android 4.0 na elu.
Ọ bụ a zuru okè oke nke Android égbè egwuregwu n'ihi na ndị na-egwu ma kwere na N'ọgbụgba égbè egwuregwu na-abụghị nanị banyere na-agba ọsọ na égbè kamakwa ihe ọtụtụ ihe ndị ọzọ karịa nke ahụ.
10. Mass Mmetụta: Infiltrator
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.2 na elu.
Ọ bụ ihe ọzọ kasị mma N'ọgbụgba égbè egwuregwu. Mezue ihe aga-eme na-emeri na-agbata n'ọsọ. Amamiihe ndịna-emeputa, ịtụnanya ike, ezi akụkọ na ọtụtụ ndị ọzọ bụ n'ebe aka ịghọta ọkpụkpọ anya.
> Resource> emulator> The World si Best agbapụ Games maka Android na I Kwesịrị Ịmara